Ahoana ny fomba hanatsarana ny famoahana gazety ho an'ny fikarohana
Talata, Aprily 5, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Miara-miasa amin'ny mahatalanjona izahay fifandraisana amin'ny vahoaka manamafy ny tenantsika sy amin'ireo mpanjifanay. Ny fifandraisana amin'ny besinimaro dia mbola fampiasam-bola lehibe - ny olona ao amin'ny Dittoe PR dia nanisy firesahana antsika momba ny New York Times, Mashable ary tranokala malaza maro hafa.
Na dia takatry ny manampahaizana PR aza ny fomba fanoratana famoahana gazety mahasarika sy fizarana azy ireo ho an'ny mpihaino marina, indraindray tsy manatsara ny famoahana gazety izy ireo ary mety ho karohina ihany koa.
Hamarino foana fa azo refesina ny fifamoivoizanao Press Release. Manampy izahay fanaraha-maso ny fampielezan-kevitra sy pejy fitobiana tokana mankany amin'ny Gazety fanaovan-gazety izahay mba hahitantsika hoe avy aiza ny fifamoivoizana ary ny lanjany.
mampiasa teny lakile mifandraika amin'ny lohateny ny Famoahana an-gazety - izay ampiasaina amin'ny lohatenin'ny pejy an'ireo toerana itodihana izay ifandraisana aminy.
Target Andian-teny lakile 1 ka hatramin'ny 3 mifandraika amin'izany ao anatin'ny vatan'ny fanambarana an-gazety ary alao antoka fa naverinao ireo. Ny fampiasana azy ireo amin'ny lohateny kely na ny fandefasana azy ireo amin'ny sora-matevina na fanindriana dia manampy koa!
Ampidiro rohy miverina amin'ny tranokalanao na pejy fitobiana ao anatin'ny fanambarana an-gazety ary aza hadino ny mampifandray ilay teny lakile na fehezanteny, tsy ny anaran'ny orinasanao. Raha tsy afaka manampy rohy ianao dia alao antoka fa hita eo akaikin'ny andian-teny lakile ny rohy.
Mampiasà sary ao anatin'ny tontolon'ny famoahana gazety nataonao. Omeo anarana ny rakitra amin'ny alàlan'ny teny lakile (tsipika ho an'ny habaka) ary, raha azonao atao ny mampiditra azy amin'ny lahatsoratra na lohateny hafa - ampiasao teny lakile.
Mandany ny vola. Namoaka fanambarana an-gazety aho alohan'ny tsy nandoavana ny fizarana ary tsy nisy na dia bitsika iray aza… nandoa ny fizarana hatramin'ny MarketWire, PRWeb, PressKing na serivisy hafa dia mety hampitombo ny mety hisongonan'ny vaovaonao amin'ny tranokalam-baovao manana fahefana lehibe.
Ny fanatsarana ny fanambarana an-gazety dia afaka manome fiakarana fanampiny amin'ny tranokalan'ny orinasan'ny orinasa rehefa zaraina sy ampiarahina amin'ny alàlan'ny indostria mifandraika amin'izany na tranokalam-baovao hafa izany fanambarana an-gazety izany. Aza adino ny fotoana ahafahana mamorona backlinks sarobidy miverina amin'ny tranokalanao, mampiakatra ny laharanao ary mampitombo ny fahefan'ny tranokalanao amin'ny motera fikarohana.
Tags: dittoeprtsenaprfizarana prvalandresaka nifanaovana tamin'ny mpanao gazetyfizarana gazetyfanoratana an-gazetypresskingprweb
Inona no mampiavaka ny media sosialy?
Google Analytics: Araho ny kaonty marobe (Kaody vaovao)
Apr 5, 2011 ao amin'ny 11: PM PM
Ka inona no lazainao fa tokony hampiasa kinova SEO natsonika tamin'ny fampahalalam-baovao izahay?
Eny tokoa, Bob. Ny toeram-pizarana PR sasany dia tsy manome fotoana hampiasa HTML, na izany aza. Vokatr'izany dia afaka manampy ny fampiasana teny lakile mifanila sy ny fizarana tsara.
Apr 6, 2011 ao amin'ny 6: PM PM
Ankafizo ny fanonona PRWeb ao amin'ny lahatsoratranao Doug 🙂
Ao amin'ny PRWeb.com dia manana loharanom-pahalalana marobe amin'ny fanatsarana ny famoahana gazety ho an'ny motera fikarohana izahay, ireto misy torohevitra fohy 5 hanombohana. Marina ny hevitrao etsy ambany, satria manampy amin'ny SEO ny fampiasana teny lakile sy ny fizarana tsara.
Raha manana fanontaniana hafa momba ny fampahalalam-baovao ianao amin'ny SEO, dia azonao atao ny mibitsika anay hatrany @prweb 🙂
Mpitantana vondrom-piarahamonina, PRWeb
Apr 7, 2011 ao amin'ny 12: PM PM
Misaotra nanonona ny PressKing koa!
Ny fandefasana fanambarana an-gazety dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ny SEO, tokoa. Izay no antony anomezantsika fitaovana fandrefesana SEO (miaraka amin'ny modely fanaovan-gazety sy fanaraha-maso ny haino aman-jery) - mahafinaritra foana ny mijery ny hetsika an-tserasera, sa tsy izany?
Manana fiasa fanampiny vitsivitsy havoakanay izahay mandritra ny herinandro ho avy - hotehiriziko ianao!
Apr 12, 2011 ao amin'ny 1: PM PM
Ny fizarana gazety an-gazety dia singa iray lehibe amin'ny fananganana rohy SEO. Zava-dehibe ny mampiditra an-tsoratra vatofantsika sy rohy ao amin'ny vatan'ny famotsorana. Na izany aza, tsy maintsy tadidinao fa mila fampilazana vaovao ny fanambarana an-gazety. Aza mandany ny fotoana sy ny vola amin'ny fanambarana an-gazety izay tsy raharahian'ny olona.
Tsy afaka nanaiky bebe kokoa, Nick. Indraindray ny orinasa manambany ny
newsworthiness, tho. Rehefa misalasala dia avoahy!
Oct 11, 2011 amin'ny 10: 42 AM
Izaho dia notendrena tamin'ny famoahana gazety ho an'ny orinasanay ary te-hahafantatra ny fomba hialana amin'ny ratra noho ny fananana atiny duplicate? Tamin'ny fangatahako fahatelo momba ny fandefasana azy dia tsapako fa raha samy nametraka ny lahatsoratro ny tsirairay tamin'ireo tranonkala ireo dia mety ho hitan'ny motera fikarohana ho toy ny atiny duplicate izy io ary handevina ny vokatra vaovao. Inona no tetika tsara harahina?
12 Okt 2011 amin'ny 7:18 PM
Raha mandinika tsara ny 'atiny duplicate' ianao, dia angano kely fotsiny fa ho voasazy ianao amin'izany. Raha ny tena izy dia tsy misy izany sazy izany. Jereo ny bilaogy Google ofisialy:
Ny atiny avo roa heny dia tsy misy fiatraikany ratsy, saingy mety hiteraka vokany tsara izany. Nahoana? Satria mety hampifandray amin'ny atiny izay naoriny ny olona. Ianao dia maniry ny hamoahana atiny amin'ny URL tokana mba hifandraisan'ny olona amin'ilay URL tokana. Rehefa mampifandray an'io URL tokana io izy ireo dia tsara toerana kokoa. Rehefa mampifandray amina pejy hafa izy ireo, dia tsy hilahatra araka ny tokony ho izy ny pejinao.
Ny fizarana fanambarana an-gazety dia tsy fikasana hamitahana ireo milina fikarohana… fomba fanao andramana sy tena izy hizarana vaovao, na amin'ny fomba nentim-paharazana na amin'ny tranonkala.